Kaarboon/daawaha Warshadda Tube ee aan xuduud lahayn, Shirkado cusub - Shiinaha Kaarboon/Daawaha Tube -saareyaasha Tube
1045 S45C C45 45# Tuubooyinka birta aan xuduudka lahayn ee loogu talagalay mashiinnada ujeeddooyinka dhismaha
No.45 steel waa bir qaabdhismeed kaarboon tayo sare leh oo leh adayg hooseeya iyo goyn sahlan. Waxaa inta badan loo adeegsadaa sidii template, biin iyo boostada hagaha ee caaryada, laakiin waxay u baahan tahay daaweyn kulayl. Heerkulka daaweynta kulaylka ee lagu taliyay: caadiyeynta 850, bakhtiinta 840, kulaylka 600. Waxa ku jira kaarboon (c) oo ku jira halabuurka kiimikada waa 0.42-0.50%, Si ka kooban 0.17-0.37%, Mn ka kooban yahay 0.50-0.80%, Maaddada CR waa ka yar 0.25%.
Waxyaabaha kaarboonka ah ee 20 birta ah waa 0.2%, kaas oo iska leh birta kaarboonta leh oo tayo sare leh, fidinta qabow, carburizing iyo bir adkaynta. Birtu waxay leedahay awood yar, adayg wanaagsan, balaastik iyo weldability. Awoodda gilgilashada waa 253-500mpa iyo fidinta waa%24%. Gobolka sahaydu waa mid aan kululayn, adkaysi ≤ 156hbs.
1020 S20C 1C22 C22 Q235 20# A3 Tuubooyinka birta aan lahayn ee ujeeddooyinka dhismaha